Gubha Unyaka omusha e-Turkey - kabili fun. Okokuqala, kungenzeka ukugubha lolu suku kwenjabulo ngaphandle isaladi "Olivier" nezinye, hackneyed, lokubhalela yendabuko, futhi okwesibili, ukuthola engaziwa izivakashi kakhulu kuleli zwe. Phela, woza lapha ikakhulu ehlobo. Winter Turkey inikeza izivakashi ukuzijabulisa okuningi. Futhi omunye wabo - ukumemeza lapho ngomvimbo phakathi kwamabili, «! Mutlu Yillar», Yenza isifiso futhi ube ingilazi brandy, exutshwe soda (uphendulela isiphuzo Milky, ngalokwanele okusikhumbuza champagne).
Unyaka omusha e-Turkey beqala ukujabula akunjalo kudala - ngo-1935. umholi wezombangazwe inhloko yezwe Ataturk wawuthi Republic kuphela uye waphumelela uma wokuziphilisa. Lapha ungakwazi ukuhlangabezana ngonyaka ozayo waqala emuva ngo-1926, kodwa ngenxa yezwe ebehlala ku likaJulius, iholidi kugujwa ngoMgqibelo wokuqala ka-January. Ekuqaleni, abantu baseTurkey abavamile ungazange ngempela kugujwa lolo suku, kodwa kamuva abadonsekela. Manje, ngabe kukuliphi idolobha elincane noma umuzana ekupheleni kukaDisemba, qiniseka ukuhlobisa izindlu, ezitaladini namawindi esitolo. AmaSulumane iningi Turkish ukuhlobisa isihlahla sikaKhisimusi ekhaya, nakuba lo mkhuba, futhi udumo izimpande yobuKristu.
Ezivame New Year kugujwa Turkey AH - Muslim ikhalenda kwenyanga. Kodwa, lo mkhosi nge "usuku ezintantayo" ikakhulu has a okungokwenkolo, kuyilapho ebusuku ngo-December 31 kuya ku-January 1, egcwele fun, kumnandi kanye nezipho. Babathanda kakhulu kulo mkhosi izingane: ngabo ngalesi sikhathi, kanye izingane kwamanye amazwe, iza Noel Baba (uFather Christmas) futhi uletha izipho. Ngokuvamile, emashumini eminyaka amuva nje, Ngenxa yethelevishini, abantu baseTurkey ngokwethukela yokukopisha isiko European: ngifaka yonke indawo ithengiswe, Christmas yokuthengisa abazenzi, futhi umndeni kwabuthana etafuleni, bedla turkey eyayigcwele.
Uhlose ukugubha uNyaka Omusha Turkey, ungalindeli ukuthi lokhu kuzoba isabelomali: iholidi - ke iyiho- ekuphambukeni. Lapho ukuya nijabula ngenhliziyo yonke kule ebusuku enchanting? Wokugujwa ngobukhulu isikali aphethwe e Ankara, Istanbul, kanye nemizana of the Riviera iMedithera. Kunokunye ongakwenza - ski zokungcebeleka Turkey (yebo, kukhona ezinye!), Kuphi, njengoba ogwini, ukuzijayeza uhlelo "zonke okufakayo".
Izindawo mnandi kakhulu futhi ekhululekile e Istanbul izindawo Pera, Kadikoy, sultanahmet, Taksim. Amahhotela Abaningi izivakashi zabo ukuhlela esidlweni sakusihlwa. City iyenqa yizivakashi, owafika ukugubha uNyaka Omusha Turkey. Izibuyekezo ajabulela ukubalula ukuthi ungachitha ebusuku abagibele isikebhe, beya ku kobuso Bosporus. Kube linikeza uhlelo samaholide ukudla kanye show. By the way, iziqhumane kaNcibijane engcono bayahlonishwa kusukela olwandle.
Labo abakhetha indawo Christmas amaholidi eMedithera Riviera, futhi awalulahlanga. Isimo sezulu e-Turkey loNyaka Omusha sihluke kakhulu nesethu, zibe ngcono. Nokho, kukhona imvula, kodwa emoyeni ize efudumele, nolwandle - ngisho ukufudumala. Uma ukubhukuda ungakhululekile ku-20, ensimini ka the Amahhotela okunethezeka babe amachibi evuthayo, hammams nezinye ukwelashwa spa. Enye "iqhinga" izophawula iholide iLotto Christmas. -Turks - abantu ukugembula, nakumalotho aphethwe njalo. Nokho, ekupheleni kuka-December kumenyezelwa umklomelo okhethekile - isamba abalulekile kakhulu. Amahhotela athile isipho New Year amakhasimende ayo ukuthenga amathikithi e-lotto ngamaqoqo. Kungenzeka-ke waphaphama ngo-January 1, uzothola egumbini lakho a "ivawusha ojabulayo '.